Faahfaahin dheeraad ah Kasoo Baxaysa Dagaal Ka Dhacay Degaanka Kalshaale ee Gobolka Ceyn • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Faahfaahin dheeraad ah Kasoo Baxaysa Dagaal Ka Dhacay Degaanka Kalshaale ee Gobolka Ceyn
Faahfaahin dheeraad ah Kasoo Baxaysa Dagaal Ka Dhacay Degaanka Kalshaale ee Gobolka Ceyn
Shalay gelinkii dambe ayaa degaanka Kalshaale ee gobolka Ceyn ka dhacay dagaal u dhaxeeya Ciidamada maamulka Somaliland iyo dadka degaanka.
Dagaalka ayaa waxaa ka dhashey khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaarey labada dhinac.
Guddoomiyaha gobolka Ceyn ee dhinaca Puntland Xariir Maxamuud Axmed oo maanta u waramaayay warbaahinta Horseed Media ayaa sheegay in dagaalka ay ku geeriyoodeen 4-kamid ah dadka reer Kalshaale isla markaana Ciidanka Somaliland ay qabteen 7-maxbuus.
Wuxuu sheegay in uusan aqoon khasaaraha dhabta ah ee gaarey dhanka Ciidanka Somaliland isagoo sheegay inuu jiro dhimasho iyo dhaawac oo dhankooda kasoo gaarey dagaalka.
Xirriro kala duwan oo aan la sameynay dhinaca Somaliland ayaa inoo suurtagali wayday in aan helno khasaaraha dhankooda,balse warar lagu kalsoonaan karo ay sheegaayan in ugu yaraan hal askari oo Somaliland uu ku dhintey dagaalka.
Degaanka Kalshaale ayaa sanadkii hore ka dhacay dagaal u dhaxeeyey labo beelood kaas oo dhaliyey khasaaro badan,waxaana waayadan maamulka gobolka Ceyn ee Puntland ka digayeen in dagaal kale uu halkaas ka dhaco.